Ikhaya likaLeonidio - I-Airbnb
Ikhaya lethu lihlala kwindlu ehlaziyiweyo entle, esanda kwakhiwa kumbindi weLeonidio (iNdawo yokuHlaliswa kwezeMbali yeSintu), kwindawo ezolileyo enombono omangalisayo woMprofeti uElias ehlathini kunye neDafonas torrent.
ILeonidio yeyona ndawo ifanelekileyo yokuya kwiiholide zosapho okanye olunye ukhenketho! Ngokukodwa kwabo banomdla wokukhwela iRed Rock, ukuhamba ngeendlela zikaParnonas okanye ukukhwela ibhayisekile
Le ndlu isanda kwakhiwa inemigangatho emibini!
Kumgangatho wokuqala ziindawo eziqhelekileyo - ikhitshi, igumbi lokuhlala, iWC kunye nendawo encinci yokusebenza, ngelixa kumgangatho wesibini kukho amagumbi amabini okulala kunye neebhedi ezimbini nganye kunye negumbi lokuhlambela elinye.
Indlu intle kwaye inelanga imini yonke inombono oqaqambileyo wehlathi eliluhlaza loMprofeti uElias kunye nomlambo waseDaphonas owela iLeonidio. Iibhalkhoni zendlu sesinye sezizathu zokuba wenze ukuhlala kwakho kukhetho olulodwa lokuphumla.
Ummandla wethu uzolile unombono omangalisayo wentaba eluhlaza. Indawo efanelekileyo yokuphumla!
Sisoloko sisesandleni sakho ngalo naluphi na ulwazi okanye ingcaciso onokuyifuna. Singacebisa uhambo olufutshane okanye olude oluqala eLeonidio njengeelwandle ezintle onokuqubha (ngaphezulu okanye ngaphantsi kwaziwa), iilali ezipholileyo ezisezintabeni okanye iimonki ezichasene nomxhuzulane. Ukuba ungumntu othanda ukunyuka okanye eminye imisebenzi, singakucebisa amacandelo okunyuka, iindledlana zentaba iParnon kunye neLeonidio kunye nezalathiso zebhayisekile.
I-Leonidio ilungele imisebenzi emininzi; ungalibazisi ukusibuza!
Sisoloko sisesandleni sakho ngalo naluphi na ulwazi okanye ingcaciso onokuyifuna. Singacebisa uhambo olufutshane okanye olude oluqala eLeonidio njengeelwandle ezintle onokuqubha (n…
Inombolo yomthetho: 00000088080